Dib u soo noolee wejiga isha - Maaskaro guriga lagu sameeyo | Bezzia
Susana godoy | 12/01/2022 12:00 | Quruxda
Meesha isha waa mid ka mid ah meelaha ugu jilicsan, sababtoo ah maqaarku waa ka khafiifsan yahay oo markaa wuu ka xanuun badan yahay wejiga intiisa kale. Intaa waxaa dheer, sida aan ognahay, wareegyada mugdiga ah waxay sidoo kale u muuqan karaan sababo kala duwan waxayna degayaan nolosheenna, taas oo ka dhigaysa indhaheenna kuwo caajis ah. Sidaa darteed, waa in aan hoos ugu dhaadhacnaa shaqada si aan dib ugu soo noolayno isha indho-shareer iyada oo la adeegsanayo maaskaro taxane ah.
Maadaama ay ku jiraan cuntooyinka guriga lagu sameeyo, waxaan maqaarka siin doonaa dhammaan maaddooyinka uu runtii u baahan yahay. A fuuq-bax wanaagsan iyo sidoo kale sharad ku saabsan fitamiin E waa qaar ka mid ah tallaabooyinka aasaasiga ah ee ay tahay in aan ku xisaabtano. Laakiin haddii aad rabto inaad ku aragto qaab maaskaro si aad u cusboonaysiiso wejigaaga, ha seegin wax kasta oo soo socda.
1 Ukun cad si uu u soo nooleeyo xuubka isha
2 Ku sharad maaskarada antioxidant-ka
3 Ha seegin avokado!
4 Yogurt dabiiciga ah
Ukun cad si uu u soo nooleeyo xuubka isha
Isagoo ka hadlaya fitamiin E, ukunta cad waxay ka kooban tahay fiitamiinkan sidaas darteed waxaan ku jirnaa gacmo wanaagsan. Anagoon iloobin inay leedahay kooxda B, sidaas darteed had iyo jeer waxay ilaalin doontaa maqaarkeena. Markaa, waa in aan ku dabaqno aagga lagu daweynayo, taas oo kiiskan ah isha isha. Waxaan u ogolaanay inay nasato ilaa ay ka engegto sababtoo ah tani waxay naga caawin doontaa inaan adkayno maqaarka sida aan u baahanahay. Kadibna iska saar oo si fiican u maydh wejigaaga, mar kastana waxaad marsanaysaa kareem qoyan. Xusuusnow inaad samayn karto maalin kasta si aad u awooddo inaad aragto natiijooyinka ugu fiican ee ay naga tagi doonto ka hor.
Ku sharad maaskarada antioxidant-ka
Waanu ka faalloonnay oo waa in maqaarku u baahan yahay qiyaasta fitamiinada ah, markaa, Ma jiro wax la mid ah sharadka maaskaro sidda dhammaan cuntooyinka na siiya qiyaasta lagama maarmaanka ah ee antioxidants. Waa run in ay badan yihiin, laakiin xaaladdan waxa aynu isku darsanaa laba karootada oo aynu ku qasno casiir liin ah iyo dhawr qaado oo malab ah. Marka aan haysano dhammaan isku dhafka si fiican isku mid ah, waa waqtigii lagu mari lahaa maqaarka iyo aaggaas gaarka ah si loo soo nooleeyo xuubka isha. Hadda waa inaad sugtaa ilaa 15 daqiiqo ka dibna ka saar biyo badan. Ugu dambeyntii, ma ilaawi kartid inaad marsato qoyaanka aad jeceshahay, si aad u sii dhaqaajiso natiijooyinka.
Ha seegin avokado!
Quruxda iyo suxuunta aan jecelnahay labadaba, waxay had iyo jeer ku jirtaa qadarka nafaqo ee ay leedahay. Marka, marlabaad, ma aadan rabin inaad lumiso dib u soo kabashada ishaada. Kiiskan waxaan u baahanahay nus avokado oo si fiican u bislaaday. Waxaan ku qasi doonaa ukun jaallo ah oo la garaacay iyo sidoo kale dhowr dhibcood oo saliid ah oo noqon karta saliid rosehip, maadaama aad loo isticmaalo xeeladahaas. Marka aynu si fiican u samayno isku darka, waxaanu mari doonaa goobta lagu daweynayo, waxaanu sugaynaa dhowr daqiiqo oo mar labaad ka saar biyo. Shaki la'aan, maqaarku wuxuu ururin doonaa dhammaan fiitamiinnada iyo fuuq-celinta ay maaddooyinkani siyaan.
Yogurt dabiiciga ah
Si ballaaran markaan u hadalno, waxaan dhihi karnaa taas Yogurt dabiiciga ah waxay caawisaa in la baabi'iyo laalaabyada, marka lagu daro siinta iftiin badan maqaarka iyo xitaa la dagaalanka finanka. Hadaba waxa ay ka mid tahay maaddooyinka xidigaha balse maanta waxa aynu ku dari doonaa qaado oo aloe vera ah. Maadaama uu fuuq-baxa sidoo kale ku jiro maaddadan. Si wada jir ah ayay maqaarkeena uga dhigi doonaan mid caafimaad badan, jilicsan oo jilicsan. Sidaa darteed, waxaad mari doontaa maaskaro ahaan, waxaad sugi doontaa ilaa 25 daqiiqo ka dibna, ka saar biyo sida aan ku samaynay mid kasta oo ka mid ah tallaabooyinka. Maqaarkaagu aad ayuu u jilicsanaan doonaa, laakiin haddii aad ku celiso ficilkan dhowr jeer todobaadkii oo aad ku nasato dhawr xabbo oo qajaar ah oo indhahaaga ah, waxaad weli ogaan doontaa saameynteeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Quruxda » Maaskaro si ay dib ugu soo nooleeyaan xuubka isha